Kudar "ka reeban" ogeysiisyada sheekeysiga ee Telegram | Wararka IPhone
Kudar "ka reeban" ogeysiisyada ku saabsan sheekaysiga Telegram
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Telegram waxay ku dareysaa muuqaal cusub oo xiiso leh adeegsadayaasha barnaamijka. Waxay ku saabsan tahay qaybta cusub "Ka reeban" taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan ku darno isbedelo taxane ah ogeysiisyada shaqsi ahaan iyo wada hadal kooxeed.
Intaa waxaa sii dheer, algorithm hashing hashing algorithm cusub ayaa lagu daray, taas oo aragti ahaan loo maleynayo inay sifiican u ilaalinayso xogta dadka isticmaala ee iska diiwaangaliyay shaqada Baasaboorka Telegram. Caqli ahaan, marka lagu daro wararka ku saabsan howlaha Ka-reebitaanka iyo ilaalinta Baasaboorka Telegram, ka nooc cusub 4.9.1 waxay kudareysaa isbadal yar, hagaajinta amniga iyo xasiloonida barnaamijka iOS.
Halkeen ku hagaajinaa waxyaabaha ka reeban ogeysiisyada?
Si loo helo qaabeynta waxyaabaha ka reeban ogeysiisyada Telegram waa inaan tagnaa Ogeysiisyada iyo dejinta Codadka. Hordhaca waxaan ku arki doonnaa liiska cusub dhammaan sheekooyinkeena iyo ogeysiisyada shaqsiyeed ee aan ka helno. Xusuusnow in xitaa aan badali karno codka asalka ah ee ogeysiisyada koox kasta ama isticmaaleyaasha, waxay sidoo kale u ogolaaneysaa kooxda ama isticmaaleha in la aamusiyo 1 saac ama 2 maalmood.
Si tartiib tartiib ah ayey farriinta farriinta farqiga u dhex dhigtay kumannaan qof oo adeegsadayaal ah iyadoo hadda la tixgelinayo qaar ka mid ah dhibaatooyinka ay qabaan sababo la xiriira arrimaha asturnaanta ee dalalka sida Ruushka barnaamijka ayaa wali ah mid loogu jecel yahay isticmaalayaasha fariimaha, sida iska cad had iyo jeer ka hooseeya WhatsApp-ka caanka ah. Ka tagida tartanka, waxa muhiimka ah ayaa ah in sida ugu dhakhsaha badan ee aad u cusbooneysiin karto barnaamijka si aad uga faa'iideysato horumarkan la hirgaliyay iyo sixitaanka lagu sii daayay amniga iyo xasiloonida
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Dukaanka App » Kudar "ka reeban" ogeysiisyada ku saabsan sheekaysiga Telegram
Twitter wuxuu tijaabiyaa nidaam fariin cusub oo leh tilmaamayaasha waxqabadka